All they do is.. - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Abdinasir Kadawo, October 2, 2009 in Politics
fight their own pple:
Boliska Gaarka Ah ee DDS ayaa Diley Tiro 80 Ka Badan oo ONLF Ah o Ay Ku Jiraan Hogaamintii Shuftadu
Dagaallo ka dhacey aagagga Garigo’an, Farmadaw, Dulqabaw, Gabagabo & Isku-Dhoonley, intii u dhaxeysay 29-ka June iyo 1-da July,2009 ayaa lagu diley tiro kor u dhaafeysa 80 oo ka tirsan shuftada ONLF. Sida lagu xusey qoraal uu soo saarey xafiiska Nabadgalyada ee DDS, waxaa xubnaha ONLF laga diley ku jira hoggaamintii shuftada, & budh-cad kale oo boob iyo dhac ku hayey bulshada ree miyiga ah, waxaana ay kala yihiin sida soo socota;
Ka sokow xubnaha kor ku xusan oo dhamaan meydkoodii la gartey, isla mar ahaantaana ah hoggaamintii shuftada, waxaa iyana la gartey magacyada hoos ku qoran oo ka trisanaa ONLF, laguna diley dagaalladii todobaadkii hore.
Bisle Yuusuf Carta
Raage Cabdi Naasir
Maxamed Axmed Boon
Yuusuf Yare Maxamuud
Yaasiin Jaamac Axmed
Ciid Badal Raage
Faarax Cali Geele
Maxamuud Cali Faarax
Maxamuud Cabdi Dheere
Dayax Axmed Cali
Maxamed bashiir Maxamuud
Maxamed Cabdulaahi Nuur
Faysal Nuur Cabdi
Inna Macalin Wacdi
Dubad Siciid Wacdi
Xasan Ibraahin Maxamuud
Maasa Maxamed Cabduqaadir
Cabdulaahi Cabdi Mursal
Cabduqaadir Macalin Yaasuf
Dayib Maxamuud Faroole
Inna Cabdi Naasir
Cabdi Af Waranle
Balaayo idin heshay.
Baaq, Dawlada Deegaanka Soomaalliyeed oo Ku Socda Qabaa'illada Dariska La ah Deegaanka
Sida la wada ogsoonayey, ururada argagixisada ah ee ONLF,& UWSLF(Al-Itaxaad) waxay dhaca, boobka, iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka deegaanka Soomaaliyeed, ka soo maleegaan, wadanka Eriteria, waxeyna soo dhex maraan Soomaaliya, iyadoo ay uga wacantahey, ineysan Soomaaliya lahayn xukuumad ilaalisa waxa ka gudbaya xuduudeeda. Xog badan oo ay Dawlada Deegaanka Soomaaliyeed ka heshay, xubnihii lagu soo qab-qabtey dagaalladii ay dawladu...
Sida la wada ogsoonayey, ururada argagixisada ah ee ONLF,& UWSLF(Al-Itaxaad) waxay dhaca, boobka, iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka deegaanka Soomaaliyeed, ka soo maleegaan, wadanka Eriteria, waxeyna soo dhex maraan Soomaaliya, iyadoo ay uga wacantahey, ineysan Soomaaliya lahayn xukuumad ilaalisa waxa ka gudbaya xuduudeeda. Xog badan oo ay Dawlada Deegaanka Soomaaliyeed ka heshay, xubnihii lagu soo qab-qabtey dagaalladii ay dawladu la gashey ururada nabadiidka ah ayaa caddeysay, goobaha xuduuka ka baxsan ee ay ka soo maleegaan, qorshayaasha ay rabaan in qalalaase ay kaga abuuraan deegaanka, & waliba beelaha ay soo dhex maraan ee marinka ay ka dhigteen, si ay nolosha bulshada deegaanka Soomaaliyeed u bur buriyaan.
Haddaba, Dawlada Deegaanka Soomaaliyeed, & Dawlada Federaalka Itoobiya, oo ku jra ol-ole ballaadhan, oo la damacsanyahey, in si wada jir ah, waddanka gudihiisana looga baa bi’iyo Al-itaxaad iyo ONLF, isla markaana looga ilaaliyo ineysan waddanka soo galin, ayaa waxay ugu baaqayaan in qabaa’illada dagan xuduudka Soomaaliya ee dariska la ‘ah deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyo maamullada ka jira, ay dhulkooda ka ilaaliyaan in uu noqdo wado ay soo maraan argagixisada, Al-Itaxaad & ONLF.
Dawlada Deegaanka Soomaaliyeed, waxay aaminsantahey in daris wanaag iyo is-kaashi dhan walba ah lagu wada noolaado, la iskana ilaaliyo, cadawga duullaanka ku ah nolosha dad shacab ah, sidaasi darteed, waxey qabaa’ilka iyo maamullada dalka Soomaaliya ee dariska deegaanka la ‘ah ugu baaqeysaa in kaalintooda dari-wanaag ay ka soo baxaan. Dadaalkan loogu jiro in xuduuda iyo meelaha ay soo marayaan laga soo afjaro, DDS iyo Dawlada Federaalka Itoobiya, oo wada jira ayaa tallaabo ku habboon ka qaadi doona ciddii argagixisada, Al-Itaxaad & ONLF gacan ku siisa iney soo galaan gudaha deegaank Soomaalida.
Dawlada Deegaanka Soomaaliyeed
and preoccupied with st*p*d flag:
Ismaamulka Somalida ethiopia oo u samaysatay astaan u gaar ah calankooda
Baarllamaanka deegaanka Soomaalida, ayaa fadhigiisii u danbeeyay ee uu bishii ina dhaaftey ku yeeshay
magaalada Jigjiga, ku go’aamiyey, in calanka deegaanka laga baddalo, midabka buluuga ah iyo xidigta. Haddaba guddi uu baarllamaanku u xil-saarey iney soo diyaariyaan midabka lagu baddali doono, ayaa durbaba go’aamiyey in buluugii lagu badalo midabka huruuda ah xidigtiina lagu badalo sawirka neef geel ah.
Midabka huruuda ah ee uu calanka cusubi yeelan doono, ayaa midabka calanka deegaanka Soomaalida u dhaweynaysa midabka calanka federaalka Itoobiya, iyadoo sidoo kalena sawirka neefka geela ahi u taaganyahey dhaqashada geela oo ay dadka deegaanku caan ku yihiin.
Midabka buluuga iyo xidigta, ayaa markii hore laga soo qaatey calankii Soomaaliya, iyagoo islamarkaasi u taagnaa Soomaaliweyn, waxayna baarllamaanka deegaanku go'aamiyeen in midab kale oo ka turjumaya deegaanka lagu badalo.
Dadka deegaanka ayaa jecel inay helaan wax ay iyagu leeyihiin,taasi waxay hirgashay maanta oo ay ka dhexmuuqato neef-geela oo lagu yaqaan deegaanka.